African Tourism Board inoshora Kusateerera Mutemo kweSouth Africa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » African Tourism Board inoshora Kusateerera Mutemo kweSouth Africa
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kuvakazve • South Africa Breaking News • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
VaCuthbert Ncube ndivo Sachigaro weAfrican Tourism Board
Mamiriro ezvinhu aripo muRepublic of South Africa ane chekuita. Mhirizhonga yakaipisisa mumakore yakatanga mushure mekusungwa kwevaimbove mutungamiri weRSA Zuma.
Hasha dzekusaenzana kwekupera-rusaruro dzinosimudzira mhirizhonga. Vagari vanoronga kuchengetedza zvivakwa, kusangana nevapambi
South Africa Hutungamiri inotarisisa kuenderera mberi kwemauto. Sachigaro weAfrican Tourism Board anopa chirevo.
Cuthbert Ncube, Sachigaro weSouth Africa weAfrican Tourism Board ari kukumbira runyararo mumakakatanwa ari kuitika uye mhirizhonga muRepublic of South Africa.
Mhirizhonga yezvematongerwo enyika uye zvematongerwo enyika ndezvekutyisidzira Kufamba, Tourism, nekudyara munzvimbo ino yeNyika, sezvo KZN iri nzvimbo yekutanga yekushanya nekudyara muSouth Africa, uye nzvimbo yezviitiko, tsika nemisangano.
Vezvenhau vanoedza kuwedzera mamiriro ekupamba kuita nyaya yezvematongerwo enyika asi chokwadi ndechekuti kukiyiwa kuri kuparadza nyika yatoshaya. Muridzi wekambani yekushanya muUnited States uye nhengo yeAfrican Tourism Board akati: II ndanga ndafungidzira nezve izvo denda raizoita kumatunhu anoshanya. Handina kufunga nezveSouth Africa mune irwo runyorwa. Ndakanga ndisingazive kuti South Africa yaitsamira pakushanya sezvayakaita.
Mubvunzo wakabvunzwa muSouth Africa: Vaimbova Mutungamiriri wenyika, VaJacob Zuma vanogona kunge vasisiri mukutonga. Asi pane chero munhu? Mhinduro yacho: Hapana kana munhu anokwidzirisa murume wake wega.
Mumiriri wekufamba muJohannesburg akadaro eTurboNews: Ndanga ndichiedza kumisikidza nzendo dzekushanya kuenda kuSouth Africa asi COVID matambudziko, uye zvino mhirizhonga…. ndisina chokwadi kuti tinodzoka riinhi.
Sachigaro we Eswatini ane mahofisi makuru eAfrica Tourism Board Cuthbert Ncube anogara muPretoria, South Africa. Akawedzera kuti:
“African Tourism Board inoshora kusatevedza mutemo nemhirizhonga zvakatsvaira mudunhu rese reKwaZulu-Natal (KZN) muSouth Africa uye zvakange zvawedzera kune dzimwe nzvimbo dzeNyika.
Simira South Africa
“Tourism ine mukana wekuti ive injini yekugadzirisa hupfumi pamwe nehupfumi.
Isu, saka, tinokumbira kudzikama uye kuzvidzora kubva kuvagari vese, nevatungamiriri vezvematongerwo enyika
“Zvirinani kugadzira kutaurirana nekugadzirisa zvinonetsa.
“Kudzoka kwezviitiko zveCOVID zvichitevera mumwe musiyano wakabata homwe dzemu Africa kwaunza rimwe dambudziko kuTravel Industry.
“Kumukira kwakadaro kusiri madikanwa hakuzochengetedze kudzikama uye mukurumbira weSouth Africa neNyika dzakabatana.
“Ndipo chete panosimukira, vafambi, vemabhizimisi vanovimba nehurongwa uhu ndipo panotanga kuita hupfumi uye kusimukira zvakare.
"Ngatidzosei Kudada kweKondinendi yedu, South Africa, pamwe nemapurovhinzi ayo senzvimbo yekutanga yakasarudzika yekushanya, MICE, Investment, uye Mhuri dzakaparara."
Iyo African Tourism Board chinangwa ndechekuti Africa ive imwe nzvimbo yekushanya yesarudzo munyika. Vamiriri veAfrican Tourism Board vanotungamira sangano mukondinendi yose. ATB dzimbahwe riri muHumambo hweEswatini. African Tourism Board Marketing Corporation inotungamirwa muUnited States of America. Mamwe ruzivo uye mafomu ehunhengo pa www.africantourismism.com